Guddiga arrimaha bulshada ee Golaha Aqalka Sare oo su’aalo weydiiyay siihayaha Wasiirka Waxbarashada Godax Bare – Kalfadhi
Guddiga arrimaha bulshada ee Golaha Aqalka Sare oo su’aalo weydiiyay siihayaha Wasiirka Waxbarashada Godax Bare
September 8, 2020 September 9, 2020 Hassan Istiila
Guddiga arrimaha bulshada ee Golaha Aqalka Sare ayaa maanta su’aalo ka weydiiyay siihayaha wasiirka waxbarashada arrimaha waxbarashada dalka iyo imtixaankii wasaaraddu shaacisay natiijadiisa.
Wasiir Cabdullahi Godax Bare, oo sharaxaad ka bixinayay kulanka ayaa sheegay in guddiga ay uga warbixiyeen xaalada waxbarashada dalka, gaar ahaan imtixaankii wasaaraddu shaacisay natiijadiisa.
Xaqiijinta tayeynta jaamacadaha dalka, heerka waxbarashada ee gobolada dalka, dhaqanka iyo hidaha heerka uu marayo, gaar ahaan halka ay mareyso howsha maktabada Qaranka iyo madxafka Qaranka, ayaan warbixin ka siinay guddiga, ayuu yiri wasiirka.
Gudoomiyaha Guddiga horumarinta adeega Bulshada, arimaha bina’adannimada, warfaafinta iyo dhaqanka BFS Axmed Macalin Cumar Nadiir ayaa wasiirka uga mahadceliyey warbixinta guud ee uu ka siiyay waxbarashada dalka, islamarkaana gudiga hawlaha uu u xilsaaranyahay ay ka mid tahay inay wasaaradaha hawlahooda kormeeraan.
Wasaaradda Waxbarashada ee dowladda Federaalka ayaa dhawaan ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga sare.
“Sida ka muuqata jaantuska natiijada imtaaxanka waxaa guud ahaan u fariistay 33,727 arday, waxaana haray ama dhacay 8,550 arday, taas oo ka dhigan 25.35% celcelis ahaan. Tani waa arrin argagax leh muujineysana fashil muuqda oo ku yimid nidaamka waxbarashada ee dalka marka indho aqooneed lagu eegno.
Guddiga xiriirka caalamiga ee Puntland oo warbixin ka dhegeystay Hay’adda Xiriirka Jaaliyaddaha